Umzi mveliso weTwill-China iTwill abavelisi, abaxhasi
I-SS yezoNyango ayikho Ilaphu elilukiweyo
Lwezo zonyango Alukho Ilaphu elilukiweyo
Kk + Pu zokhuseleko Ilaphu Ilaphu
Pp + Pe Ingubo yonyango
Kk Spunbond Nonwoven Ilaphu
Ukuncamathela kumbono "Wokwenza iimveliso zoluhlu oluphezulu kunye nokufumana amaqabane nabantu namhlanje abavela kwihlabathi liphela", sihlala sibeka umnqweno wabathengi kwindawo yokuqala yeTwill ,,,, Ukoneliseka kwabathengi yeyona njongo yethu iphambili. Siyakwamkela ukuseka ubudlelwane beshishini kunye nathi. Ngolwazi oluthe kratya, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi. Inkqubela phambili yethu ixhomekeke kwiimveliso eziphambili, iitalente ezimangalisayo kunye nokomelela okuqhubekayo kwitekhnoloji yeTwill, Amava okusebenza ebaleni asincede sakha ubudlelwane obuqinileyo kunye nabathengi kunye namaqabane kwimarike yasekhaya nakwamanye amazwe. Iminyaka, iimveliso zethu kunye nezisombululo ziye zithunyelwa kumazwe angaphezu kwe-15 ehlabathini kwaye ziye zasetyenziswa ngokubanzi ngabathengi.
I-Twill luhlobo lwe-textile weave enepateni yeembambo ezi-diagonal ezifanayo (ngokuchaseneyo ne-satin kunye ne-weave elula). Oku kwenziwa ngokudlulisa umsonto weft ngaphezulu komsonto omnye okanye nangaphezulu uze emva koko ube ngaphantsi kwemisonto emibini okanye nangaphezulu yokhuphiswano njalo njalo, nge "nyathelo" okanye ulungelelwaniso phakathi kwemiqolo yokwenza iphawu lokudibanisa uphawu.
I-ITwill luhlobo lwelaphu elukiweyo elinepateni yokudibanisa iimbambo (ngokuchaseneyo ne-satin kunye ne-weave ecacileyo). Oku kwenziwa ngokudlulisa umsonto weft ngaphezulu komsonto omnye okanye nangaphezulu uze emva koko ube ngaphantsi kwemisonto emibini okanye nangaphezulu yokhuphiswano njalo njalo, nge "nyathelo" okanye ulungelelwaniso phakathi kwemiqolo yokwenza iphawu lokudibanisa uphawu.